Ọrụ, nlekọta na mmezi | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ọrụ, nlekọta na nrụzi
Washer dere njehie H20.
Ngwa nhicha na-ede njehie N20. “N’ozuzu, agbagoro m n’elu igwe na-asacha Indesit dị ka ụgbọ ala) Mgbe m nwesịrị, enyi m na-anya akwa nhicha akwa na ndị uwe ojii na-eso ụzọ na-eso anyị tupu ọsọ ahụ…
Gini mere laptọọpụ na-anaghị akwụ ụgwọ?
Gini mere laptọọpụ na-enweghị ike ijide? Nke a bụ ihe ị ga-eme! Ikwesiri igodo abuo Lenovo Solution Center gi (ma oburu na obugh, choputara na Malite na mmemme nile ma obu ...
Kedu ọrụ ọrụ ikike? Ihe mkpuchi post? Ịchọrọ nkọwa doro anya, enyemaka, biko.
Kedu ọrụ ọrụ ikike? Ihe mkpuchi post? Ịchọrọ nkọwa doro anya, enyemaka, biko. Zakverditi The order of guarantee repair (obesgovovuvannya) abo guarantorily zamni tehnchno collapsible raskutovih kavov (dodatsya). 2. Enwere m obi ụtọ na ...
Gịnị ma ọ bụrụ na sịga sịga dị ilu?
Gịnị ma ọ bụrụ na sịga sịga dị ilu? Ọfụma sịga nwere ike ịdị ilu maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Ihe kachasị ya mere e ji nwee ọkụ ọkụ na VAPE bụ ihe na-afụ ụfụ na ajị anụ ma ọ bụ ajị anụ, nke kachasị mfe bụ ...
Biko, gwa m, olee ụzọ kachasị mma isi edo edo?
Biko, gwa m, olee ụzọ kachasị mma isi edo edo? a gaghị edochakwa ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha na brush na soda na ihe ọ bụla, mgbe ahụ, ndị na-esi ísì ọjọọ adịgide. ọ bụrụ na ị gbaa ya mgbe ahụ naanị ...
Kedu ihe mere m ji achọ ọsọ ọsọ ọsọ maka igwe eletrik?
Kedu ihe mere m ji achọ ọsọ ọsọ ọsọ maka igwe eletrik? Onye mgbaghari ugboro maka igwe eletriki nwere ọtụtụ aha ejiri ya na isi: onye na-agbanwe ihe mgbagwojiri oge maka asynchronous motors, onye na-agbanwe oge na-agbanwe agbanwe ...
Ònye maara ngwá ọrụ dị mma nke ị nwere ike ịdọpụ akpụkpọ ụkwụ aka ya?
Knowsnye maara ezigbo ngwá ọrụ ọ ga-eji gbatịa akpụkpọ ụkwụ agbatị ... Ekele n'ọdịnihu: 1.) N'ime ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ, ntụpọ dị n'ime ime akpụkpọ ụkwụ ahụ, ebe ikiri ụkwụ dị. O yiri roba dị nro. O nwere ike inyere aka, mana ...
Kedu ihe dị iche n'etiti akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ nke ụlọ ọrụ Metabo? ihe niile mepụtara n'ezie site na ọkachamara
Kedu ihe dị iche n'etiti ngwaọrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nke na-acha anụnụ anụnụ nke ụlọ ọrụ metabo? ka emechara, ihe niile emere site na http: //elektrotehnika-n+.ru/index+.php? nhọrọ = com_contentview = articleid = 94Itemid = 61 Wepu ihe mgbakwunye na adre. Gua nhazi nke ihe eji eme ike. A na-ekegide agba n’otu nzube. Hota si ebe ahu: "... Ka…
Kedu nchịkọta ịhọrọ: halogen ma ọ bụ ọkụ? Kedu ihe ìhè dị?
Kedu klọọkụ ịhọrọ: halogen ma ọ bụ ikanam? Kedu ọkụ karịa? LED dị mma karịa diode na-enye ọkụ - ịchekwa ọkụ eletrik ... halogens na-eri ọtụtụ eletrik; a na-eji ha dị ka ihe na-enye ọkụ na ebe nchekwa ọkụ, ebe obibi mmadụ maka mmadụ ...
Friji refrjiraeto Atlanta.
Friji refrjiraeto Atlanta. Wepu ọsọ agba ọsọ (na mpịakọta a igbe rọba). Mgbe ahụ, ọ dị mfe ịlaghachi azụ, agbaghala. Wepu na ihe mkpuchi ma tinye ọsọ agbaa azụ ma na-enweghị ihe mkpuchi na ...
Bee osisi dị n'èzí, gịnị ka m nwere ike ime?
Bee osisi dị n'èzí, gịnị ka m nwere ike ime? Ọ gaghị ekwe omume ịnagide onwe gị na nkewa! Ndị ọkachamara nwere ụzọ dị iche iche nke nlọghachi nke mkpuchi ụlọ. 1SHOW. Site na obere mkpisi n'etiti waaji, ndi na-enye ihe puru itinye ...
Mgbachi mkpuchi nke Switzerland
Imechi mkpuchi nke elekere Switzerland Ee, ị kwesịrị ịnụ mkpọtụ, nke a pụtara na ekpochi mkpuchi. Etu esi emechi mkpuchi elekere? Mgbe ị na-eji dochie batrị ahụ, nhicha na ọrụ ndị ọzọ ...
Kedu ka kredeti viscose dị na ala? Kedu ndụmọdụ?
Kedu ka kredeti viscose dị na ala? Kedu ndụmọdụ? Ee, ee e, gịnị mere ndị nchịkọta ájá a! Ịzụta kapeeti Peasia ma kwụwa ya n'elu mgbidi, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla dị n'ala ụlọ anyị nwere viscose ...
Ana m etinye ekwentị na ịcha, ọ na-eme! Kedu ihe a bụ?
Ana m etinye ekwentị na ịcha, ọ na-eme! Kedu ihe a bụ? Ma ọ bụ idozi ozu Na-emepụta chaja dị iche iche Ị nwere ike ịmegharị ma gbakwunye na kọntaktị kọntaktị nke ekwentị ahụ. na-ere ọkụ microcircuit. N'ụlọ ...
kedu ihe dị iche n'etiti ọla kọpa na ọla pluses na minuses nke alloys ndị a.
kedu ihe dị iche n'etiti ọla kọpa na ọla pluses na minuses nke alloys ndị a. Bronze-tin + ọla kọpa, copper-zinc + ọla kọpa. Bronze bụ obere ihe, ọla bụ mgbanwe. Na-achọ ihe ị chọrọ. A na-eji bronze maka ihe nkedo.
Ebee na Moscow ịchọta ụlọ ọrụ maka itinye teflon ka ọ na-agbapụta iji weghachite mkpuchi na-abụghị osisi?
Ebee na Moscow ịchọta ụlọ ọrụ maka itinye teflon ka ọ na-agbapụta iji weghachite mkpuchi na-abụghị osisi? Ndewo, Tinye mkpuchi na n'okporo ámá Moscow. Ụlọ Batyuninsky 6.Tele 495 348 06 71.Call.
Enwụrụ ọkụ na oven ọkụ Hansa anaghị arụ ọrụ. Na gịnị nwere ike inwe ihe kpatara ya?
Enwụrụ ọkụ na oven ọkụ Hansa anaghị arụ ọrụ. Na gịnị nwere ike inwe ihe kpatara ya? E nwere nsogbu yiri nke ahụ n'oge na-adịbeghị anya. Site na ahụmahụ m, m nwere ike ịkwado gị ka ị kpọtụrụ ụlọ ọrụ http://kazan.remont-teh-servis.ru/ Dị ka ịrụ ọrụ nile na Russia. Nnabata ...
esi ewepu pvc? banyere windo
esi ghọta na ịkwanyere? banyere polivinilhloridblin window, gaa na ọkwọ ụgbọala nke N'ezie) http://intex-mgn.ru/uslugi/izdeliya-iz-pvx-i-allyuminiya/okna-pvh.html Polyvinyl chloride chọpụtara site na mberede. French mmiri ọgwụ Henri Regnault anwalewo na-emeghe ha na 1835, ndị vinyl chloride, na ...
"Nsogbu njikọ ma ọ bụ koodu MMI na-ezighi ezi"
"Nsogbu njikọta ma ọ bụ koodu MMI na-ezighi ezi" mana o nyeereghị m aka, otu njehie ahụ (gbanwee kaadị SIM gị ma ị ga - enwe obi ụtọ)) nwere ike ịkarị agadi, kaadị SIM agbachitere m nwere otu ...
gwa m ihe mere na igwe eji asachapu uzuzu adighi ekpochapu kpamkpam ma sie ike dika nkume. otu ntụ ntụ ma ọ bụ ihe
Ihe na 21.08.2017 19.09.2018
gwa m ihe mere na igwe eji asachapu uzuzu adighi ekpochapu kpamkpam ma sie ike dika nkume. otu ntụ ntụ ma ọ bụ ihe m na-ejikarị emebe ntụ ntụ na trays, n'ihi na mmiri oyi dị njọ ...